သင့်ရဲ့ စိတ်လေး ကျန်းမာပါစ (သို့မဟုတ်) သင်သိထားဖို့လိုတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး အချက်ပြလက္ခဏာတွေအကြောင်း - Hello Sayarwon
လူတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကျန်းမာတာကို အလွယ်တကူ သတိထားမိတတ်ကြတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးဖြစ်ရင် ပလာစတာကပ်တာ၊ ဆေးထည့်တာတွေ လုပ်ကြပေမယ့် စိတ်ကလေး မကျန်းမာတာကိုကျ ကုသပေးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်ကတော့ လူတစ်ယောက်ကို ကျန်းမာတယ်လို့ ပြောနိုင်ဖို့ဆိုရင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာဖို့ လိုမှာပါ။ လူအတော်များများက စိတ်မကျန်းမာမှုကို ခံစားနေရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တောင် စိတ်မကျန်းမာနေဘူးဆိုတာကို မသိလိုက်ကြတာမျိုးပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်တွေရဲ့ စိတ်ကရော ကျန်းမာနေရဲ့လား စိတ်ကျန်းမာရေးအချက်ပြလက္ခဏာတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးဖတ်ရင်း ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့လား……….
စိတ်ကျန်းမာရေးကလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးက
ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ဖန်တီးပေးတယ်။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နိုင်စေတယ်။
အလုပ်တာဝန်တွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စေတယ်။
ဒီလို အခြေအနေတွေကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်ဖို့က စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့ လိုပါမယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ကျန်းမာမှာပါ။ ဥပမာပြောပြရရင် စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းတာ​ကြောင့် မလှုပ်မရှားဘဲနေမယ်ဆိုရင် လေဖြတ်တာ၊ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ စတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ………….
စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကတော့ အများကြီးပါ။
မိသားစု ရာဇဝင်၊ မျိုးရိုး
နေ့စဉ် နေထိုင်နေတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ စတာတွေပါ။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတဲ့ နေရာမှာ သိမြင်မှုစွမ်းရည်တွေ၊ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေတွေ အားလုံးပါဝင်နေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တွေးတောမှု၊ စိတ်ခံစားမှု၊ အပြုအမူတွေ အားလုံးကိုလည်း စိတ်ကပဲ ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။
အစွန်း တစ်ဖက်ဖက်ကို ရောက်နေတာမျိုး မရှိဘဲ ခံစားမှု ပြင်းထန်တာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ ဆုံးဖြတ်စရာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်နေတယ်ဆိုရင် စိတ်ကလေးက ကျန်းမာနေတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါက စိတ်ကျန်းမာရေး ပုံမှန် အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။
စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုတာ သွက်သွက်ခါအောင် စိတ်မနှံ့ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုပြောပြမယ့် လက္ခလဏာလေးတွေထဲက တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီး ခံစားနေရရင်လည်း စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေက ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။
နေထိုင်၊ စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလာမယ်။
အိပ်စက်မှု အလေ့အထ ပြောင်းလာမယ်။
အရင်က အရမ်းသဘောကျခဲ့တဲ့ အရာတွေကို သဘောမကျဘူးဖြစ်လာမယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခု ရှိရင်တောင် ငိုတာ၊ ဝမ်းနည်းတာမျိုး မရှိဘဲ ထူထူထုံထုံကြီး ဖြစ်နေမယ်။
အကြောင်းအရင်း မရှိပါဘဲ ကိုက်ခဲနာကျင်နေမယ်။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသလို ကူကယ်ရာမဲ့နေသလို ခံစားရမယ်။
အရင်ကထက် ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးတွေကို ပိုမို သုံးစွဲ မိလာမယ်။
အမြဲလိုလို စိတ်ရှုပ်ထွေးနေမယ်။ မေ့တတ်လာမယ်။ ဒေါသ အမြဲလိုလို ဖြစ်နေမယ်။ စိတ်ပူပန်နေမယ်။ ကြောက်လန့်နေမယ်။
နားထဲမှာ မရှိတဲ့ အသံတွေ ကြားယောင်နေမယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒါမှမဟုတ် အခြားသူတွေကို ထိခိုက်အောင် လုပ်ချင်စိတတွေ ဖြစ်နေမယ်။
နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်မယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေးက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာမှ နေ့စဉ်ဘဝကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက ရောဂါကင်းလို့ ကျန်းမာမှာပါ။ ဒီတော့ စိတ်ကလေး ကျန်းမာပါစဆိုတာကိုလည်း နေ့တိုင်း ဆန်းစစ်လို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလို့ သေချာ လေး ဂရုစိုက်ပေးပါ။
Mental Health https://medlineplus.gov/mentalhealth.html Accessed Date2December 2020
What is mental health? https://www.medicalnewstoday.com/articles/154543 Accessed Date2December 2020
Mental health: What’s normal, what’s not https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/mental-health/art-20044098 Accessed Date2December 2020
Stay home ကာလမှာ စိတ်ကျန်းမာအောင် နေကြမယ်။